Ukubonakalisa ukubonakalisaIamaphepha enzululwazi ngoochwephesha bePapernerds
Ababhali besiporho abaziingqondi nabaziingqondi baya kukubonelela ngoncedo olukhawulezayo, olunobuchule kunye nolukumgangatho ophezulu ekubhaleni ukubonakalisa kwakho.
Umboniso - khawuleza kwaye umgangatho ophezulu Masibhale!
Ukuhlaziya Kwimeko yefilosofi kuthetha okokuqala ukucinga ngento ethile. Kwangelo xesha linye ikwachaza ukubonakaliswa komfanekiso. Isithandi sobulumko esingumGrike u-Aristotle ke ngoko uza "kwiingcinga zokucinga" xa ebhala kwiNicomachean Ethics yakhe: Yonke enye into ikwangumbono wokuba siyasebenza, ukuze siqonde ukuba siyabona kwaye sicinga ukuba sicinga: kwaye ukubona nokucinga luphawu kuthi lokuba singabo. "UJohann Gottfried Herder uchaze ukuba ngaphandle kolwimi akukho Ukubonakalisa kunokwenzeka. Kwifilosofi yenkulungwane yama-20, ukubonakaliswa kubonwa njengokucinga ngokucinga. NgokukaSchnädelbach, ukubonakaliswa “sisixhobo esiphakathi Selbst- ukugwetyelwa kwefilosofi, d. UH. indlela yokusombulula ingxaki yona ngokwayo Ukucinga yakhiwe. ”U-Theodor Adorno uchaza imbonakalo njengokubhekisa emva kwindlela yokucinga ecinga nengakwaziyo ukucinga.
Ukubhala umboniso ke ngoko kuhlala kuthetha ukucinga ngemeko ethile, isicatshulwa, isemina, uqeqesho okanye icandelo lobungcali emva kwekhosi yoqeqesho, njl. Njl. Ukubonisa kubandakanya okungaphezulu kokucinga nje. Endaweni yoko, imalunga novavanyo oluhlaziyiweyo, olunolwazi, olunzulu, uvavanyo kunye nokuthelekisa oko kunamava. Kule nkalo, ukubhala ukubonakaliswa kuya kuba luxwebhu olunobunzima kakhulu olujongana nokuzazi, iingcinga zakho kunye neemvakalelo zakho. Ihlala ingxabano yobuqu nesihloko. Oku kulandela koku ukuba ihlala iyingxelo ehambelana nayo. Iinjongo ayisiyiyo indlela yosuku xa kufikwa kumba wokubonisa.
Ukuxhomekeka ekubonakaliseni kwakhona kuthetha ukuba le fom yokubhaliweyo kufuneka ihlale ibhalwa kumntu wokuqala. Umboniso udla ngokubhalwa kwixesha elidlulileyo kuba uxela ngesiganeko esadlulayo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kunokuba luncedo ukutshintshela kwixesha langoku. Olu tshintsho lweefom zezenzi lunokuba luncedo ngakumbi xa ucinga kwaye uchaza iimvakalelo.
Ukubhala umboniso kuyafuneka ikakhulu kwizifundo zoluntu, o.k.t. B. Intlalontle, Psychology, Umsebenzi wezeNtlalontle, iTheology. Iimfuno ezisesikweni zokubhala umboniso ziyafana nezo zamaphepha emfundo. Ukuba, umzekelo, ingxelo ebonakalayo iyalungiswa kwi-internship, kufuneka kukhunjulwe ukuba iingxelo zikabani mazisoloko zixhaswa Oku kunokuba kukuqwalaselwa, imisebenzi okanye imizekelo. Intsingiselo yokuboniswa koqeqesho kufuneka ibonwe kwinto yokuba kufuneka kutshintshwe phakathi kwethiyori kunye nokusebenza.
Ubume bengxelo yokubonisa kubandakanya
Iphepha lokugubungela ngolwazi malunga nawe, ulwazi malunga neprojekthi, nokuba sesikhundleni soqeqesho, kunye nesiganeko sokukhapha
Uluhlu lweziqulatho kubandakanya iphepha ekubhekiswa kulo
Inkcazo-ntetho z. B. uqeqesho: ulwazi malunga nexesha, indawo, ixesha, inkqubo
Ukunikezelwa kweprojekthi okanye uhlalutyo lweengxaki kunye nenkcazo yenkqubo
Ukuqwalaselwa kokugqibela / ukuqukunjelwa / umbono
Isibhengezo senkululeko akufuneki siphoswe kwingxelo ebonisa. Ingeniswa nokuba emva kwephepha lokugubungela okanye emva kwencwadi yokubhalwa kweencwadi.
Kwisahluko sokuhlalutya ingxaki kukho ingxoxo ecacileyo yemeko enye okanye ezingaphezulu. Amava am aphuma kwisicatshulwa apha. Umboniso ubonakalisa indlela okwazile ngayo ukuzilungiselela kwangaphambili kwaye ukuba amava afikelele kwelo nqanaba angakwazi okanye angangeni njani kwiprojekthi.
Kuba ingxelo ebonakalisiweyo ibhaliwe emva komsitho kunye / okanye iprojekthi, sele kunokwenzeka ukuba okwangoku kwenziwe uvavanyo kunye novavanyo.
Kwicandelo "Ukucamngca komntu" kukho uhlalutyo olubalulekileyo kunye novavanyo. Uvavanyo lwakho lweemeko okanye ezinje zikhanyisiwe kusetyenziswa uncwadi. Bobabini ukuthobela kunye nokuchaneka kubalulekile kweli candelo. Ayinamsebenzi nokuba amava akho agwetywe ngokufanelekileyo okanye kakubi. Ukunyaniseka kwesiqu sakho nakwisuphavayiza ye-internship kwenza ukuba ingxelo yokubonisa ibaluleke kwaye iyimise ngaphandle kokumelwa ngumxholo.
Ekuqwalaselweni kokugqibela isiphumo sokuzibonakalisa kwakho sishwankathelwe. Ukusuka kwiziphumo ozifumanele wena, unokujonga nakwikamva. Imbonakalo inokuthelekiswa nezalathiso ezikhoyo. Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, iyavakala ngakumbi indlela yokujonga imbonakalo ngokungaqhelekanga kunye nokubonelela ngeziphakamiso zeeprojekthi zophando kunye nophando.
"Ndiyaneliseka kakhulu! Olunjani lona uncedo olunokuthetha."
Uqinisekiso lwethu lomgangatho kwindawo yokubonakalisa
Mnu MANFRED MÜLLER